Xukuumadda oo Qandaraaskii Baasaaboorka Somaliland ee E-Passport-ka siisay Sadex Xildhibaan | Xeegonews.com
Xukuumadda oo Qandaraaskii Baasaaboorka Somaliland ee E-Passport-ka siisay Sadex Xildhibaan
Hargaysa(Xeegonews.com) Xukuumadda Somaliland ayaa dhawaan shaacisay inay soo samaynayso Baasaaboor Elektaroonig ah oo ah nooca Dunida laga Isticmaalo ee E-passport, hase yeeshee xukuumaddu may sheegin goorta iyo qaabka loo samaynayo baasaaboorkaasi.
Ilo wareedyo Waaheen si hoose ugu Xog waramay ayaa daaha ka qaaday Qandaraaskii Baasaaboorkaasi in ay Xukuumaddu siisay Sadexda Xildhibaan ee la kala yidhaahdo Cali Xasan Maxamud (Mareexaan), Amed Maxamed Diiriye (Nacnac) iyo Maxamed Yuusuf (Waabeeye).
Sadexda Xildhibaan ee la siiyay Qandaraaska lagu soo samayanayo Jaldiga Baasaaboorkaasi ayaa hada ku sugan Dalka Itoobiya Caasimadiisa Addis ababa, halkaas oo la sheegay inay u joogaan Fiisayaal ay ka dalbadeen Safaaradda Ingiriiska.
Ilo wareedyda warkan sheegay ayaa intaa ku daraya sababta Safarkooda bu-dhiga u ah in ay tahay Heshiis ay kula galeen arrintan Qandaraaskan shirkad Ingiriis ah, taasoo ay doonayaan inay ka soo Daabacaan Baasaabooradii.
Bixinta Qandaraaska Baasaabooradda cusub ee ay Xildhibaanadani soo daabacayaan ayaa la sheegayaa inay iska kaashadeen Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Baanka Dhexe. Xildhibaanadan qaarkood ayay wasaaradda Maaliyaddu wakhtigii Maxamed Xaashi siisay Qandaraaska Tigidhada Fiisayaasha kadib markii ay ku doodeen Qandaraas kale oo ah Tigidhada Cashuuraha lagu qaado oo si sharciga Bal marsan loo siiyay Shirkadd kale.
Soo samaynta Baasaaboorka cusub ee Somaliland ayay Xukuumaddu ku cadaysay qorsha Miisaaniyadeedka sanadka 2013-ka waxaana ku bixi doonta Lacag aan qadarkeeda lagu sheegin Digreetada uu Madaxweyne Siilaanyo ku dhaqan-geliyay soo samaynteeda.
Baasaaboorka ay muwaadiniinta Somaliland Isticmaalaan waxa la soo sameeyay Cahdigii Xukuumaddii Marxuum C/raxmaan Axmed Cali, waxaana iska lahaa oo laga amaahday Lacagtii lagu soo sameeyay Baanka Dhexe, kaasoo ilaa hada Lacagta lagu Iibsado qaata, hase yeeshee Buuga uu ka samaysnaa oo wakhtigaas la jaan-qaadayay ayaa imika noqday mid laga guuray.